Madaxwaynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqaya Ra'iisul Wasaarihisa inta lagu guda jiro 48 saacadood. - Caasimada Online
Home Warar Madaxwaynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqaya Ra’iisul Wasaarihisa inta lagu guda jiro 48...
Madaxwaynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqaya Ra’iisul Wasaarihisa inta lagu guda jiro 48 saacadood.
Madaxwaynaha Dowlada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu soo afjaray Wadatashiyadii uu waday mudooyinkaan kaa oo uu kusoo magacaabayo ra’iisul Wasaarihiisa.
Ilo lagu Kalsoonyahay oo ay Shabakada Caasimada ka helayso Aqalka Madaxtooyada Vila Soomaaliya ayaa sheegaya in Xasan sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqayo 48 saac ee soo aadan Ra’iisul Wasaarihiisa.
Xasan Sheekh Madaxwaynaha Soomaaiya ayaa dadka Soomaaliyeed waxaa ay ka sugayaan in Ra’iisul Wasaare uu u magacaabo Shaqsi karti iyo Aqoon uleh Xilkaas,Soomaaliyana ka samata bixinaya dhibaatada ay ku jirto.
Shaqsiyaad Madaxwaynaha ku dhow dhow ayaa si hoos ah waxaa ay inoogu xaqiijiyeen in Madaxwaynaha la tashiyadii uu waday Tan iyo Markii la magacaabay uu gabo gabo yahay uuna magacaabayo Ra’iisul Wasaaraha inta lagu guda jiro 48 saac ee soo aadan.
Maxamad Cabdulaahi Farmaajo oo ah Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa kamid ah dadka ugu cad cad ee doonaya in Xilkaan loo dhiibo.